Kubbadaha Ball Madax - Zhejiang Shineway Industry Limited.
Kubadda waalka kubbadda ayaa gooysa, hagaya, qaybinaya oo beddelaysa jihada socodka ee dhexdhexaadka dhuumaha. Kubada waalka ayaa leh faa iidooyin badan waana nooc cusub oo balaastig ah oo si weyn loo isticmaalo. Baalalka kubbadda oo leh shaqooyin kala duwan badiyaa waxay leeyihiin dhinacyo kala duwan, markaa ma ogtahay noocyada noocyada waalka ee meelaha ku yaal?
1. Aagagga waxaa badanaa loo qaybiyaa qaybo jilicsan oo jilicsan iyo qaybo adag oo adag.
2. Meesha banaan waxay qaadataa been abuur, shubay iyo alxanka gariiradda birta ah. Qalabka la bixiyay waa: A105, 304, 304L, 316, 316L, LF2, 42CrMo, 1Cr13, F51, Mone1, 17-4PH, iwm.
3. Kubada waxaa loo qaybin karaa kubad laba dhinac ah, kubad seddex gees ah, kubad afar gees ah, kubad qalooca, kubbadda dul sabeysa, kubad go'an, kubad qaabeeyaha V, kubbadda cirifka ah, kubbadda shanka ah, kubb adag, kubbadda bannaan, iwm sida ku cad shaqada. Oo u habeyn karaa kubbado kala duwan oo aan caadi ahayn oo loogu talagalay dadka isticmaala.
Habab kala duwan oo loo sameeyo
1. Habka loo shubay: Kani waa hab dhaqameed dhaqameed. Waxay u baahan tahay dhammaystir buuxa oo ah dhalaalid, shubid iyo qalab kale, iyo sidoo kale aqoon isweydaarsiyo waaweyn iyo shaqaale badan, maalgashi ballaaran, habab badan, habab wax soo saar adag, iyo wasakheynta Deegaanka iyo heerka xirfadeed ee shaqaalaha geeddi-socod kasta waxay si toos ah u saameyneysaa tayada ee sheyga. Dhibaatada ka daadaneysa daloolada aagga ayaan gebi ahaanba la xallin karin. Si kastaba ha noqotee, gunnada wax-soo-saarka maran way ballaaran tahay qashinkuna waa weyn yahay. Badanaa waxaa la ogaadaa in cilladaha wax lagu shubo ay ka dhigayaan mid la xoqay inta lagu gudajiro howsha. Haddii qiimaha badeecada ay kororto oo aan tayada la damaanad qaadi karin, qaabkani kuma haboona warshadeena.
2. Habka Been Abuurista: Tani waa hab kale oo ay adeegsadaan shirkado badan oo waalliga ah oo guryaha ka shaqeeya xilligan. Waxay leedahay laba hab oo wax lagu farsameeyo: mid waa in loo adeegsado bir bir ah si loo gooyo loona kululeeyo foornada meel bannaan oo adag, ka dibna lagu sameeyo farsamaynta farsamada. Midda labaad ayaa ah in lagu saxo saxanka birta ah ee ahama ee wareegsan ee saxaafadda weyn si loo helo meel bannaan oo xagjir ah, oo markaa lagu dhejiyo meel bannaan oo meera ah si loogu farsameeyo. Habkani wuxuu leeyahay sicir adeegsi heer sare ah, laakiin awood sare leh Saxaafadda, foornada kululaynta iyo qalabka alxanka argon ayaa lagu qiyaasaa inay u baahan yihiin maalgashi dhan 3 milyan oo yuan si ay u sameeyaan wax soo saar. Habkani kuma haboona warshadeena.
3. Qaabka wareejinta: Habka wareejinta birta waa hab horumarsan oo horumarsan oo leh jajab yar oo aan lahayn, kaas oo ka tirsan laan cusub oo ka shaqeysa cadaadiska. Waxay isku daraysaa sifooyinka been abuurka, xoqidda, rogrogmada iyo rogrogmada, waxayna leedahay sicirka ka faa'iideysiga maaddada sare (Ilaa 80-90%), iyadoo keydineysa waqti badan oo howsha lagu qabanayo (1-5 daqiiqo oo sameysmaya), iyo awoodda maaddada waa la labanlaabi karaa ka dib wareegaya. Sababtoo ah xiriirka aagga yar ee u dhexeeya giraangiraha wareegaya iyo qalabka shaqada inta lagu jiro wareegga, maaddada birta waxay ku jirtaa xaalad laba-gees ama cadaadis cadaadis cadaadis ah, taas oo ay fududahay in la qaabeeyo. Awood yar, hoosta sare ee culeyska fekerka (illaa 25- 35Mpa), sidaa darteed, qalabku waa miisaanka yar yahay wadarta awoodda loo baahan yahayna way yar tahay (in ka yar 1/5 ilaa 1/4 saxaafadda). Haatan waxaa u aqoonsaday warshadaha waalka shisheeye inay yihiin barnaamij farsamo wax lagu keydiyo oo tamarta keydinaya, sidoo kale waa lagu dabaqi karaa Ka shaqeynta qeybaha kale ee meeraha wareegaya. Teknolojiyada wareejinta ayaa si ballaaran loo isticmaalay loona soo saaray xawaare sare oo dibedda ah. Tikniyoolajiyadda iyo qalabku waa kuwo qaan-gaar ah oo xasilloon, iyo xakamaynta otomaatiga ah ee is-dhexgalka farsamada, korantada iyo haydarooliga ayaa la ogaaday.
Tuurista qalabkeena kubbadda ayaa ka sameysan ciida dahaarka leh, oo leh muuqaal qurxoon, cabir caadi ah, iyo wax isku shaandheyn hal mar ah.
Noocyada Ball Valve:
ISO5211 Flange Top, Anti Static Devices, Afuufa jirida cadeynta, Daloolka Balance Balance In Ball Slot
QAYBTA SHARCIYADA: API6D, API608, ASME B16.34, DIN 3357, JIS B2001
WAJIGA WAJIGA: ASME B16.10, DIN 3202, EN 558, JIS B2002
XIRIIRKA FLANGE: ASME B16.5, DIN EN 1092-1, JIS B2212, JIS B2214
BARNAAMIJKA IYO IMTIXAANKA: API598, API6D, DIN 3230, EN 12266, JIS B2003
AMMAANKA DABKA: API 607, ISO 10497
Tuuritaankeennu dhammaantood waa tiknoolajiyad ciid ah oo dahaaran
Naqshadeynta qalabka Qalabka ----- Wax soosaarka qalabka wasakhda ---- waxsoosaarka cadaadiska ----- dayactirka wax ----- geed kooxeed ----- qolof (qulqulka) ----- Dewaxing - shell Falanqaynta dubista-kiimikada-shubista-nadiifinta-kuleylka-daaweynta-farsamaynta-keydinta alaabta。
Tusaale ahaan, si faahfaahsan:
Riixitaanka wax (Wax ku shubidda Waxsoosaarka) --- Dayactirka wax - baaritaanka wax - geed kooxeed (geedka wax wax lagu beddelo) - samaynta qolof (marka hore dhuuq, ciid, ka dib dheji, iyo ugu dambeyn Hawo qalajinta qolofta cawska) - dewaxing (uumi dewaxing) --- dubista qolofka caaryada - falanqaynta kiimikada --- shubista (ku shubida bir dhalaal ah qolofka caarada) --- duqeynta gariirka --- Goynta iyo kala saarida rida iyo usha shuba --- Albaabka wax lagu shiido --- Kormeerka ugu horeeya (kormeerka burr) --- Qarax toogasho --- Makiinada --- Qabadista --- Kormeerka alaabta ee dhammaatay --- Bakhaarada
Nidaamka wax soo saarka shubku waa qiyaastii sidan. Guud ahaan marka la hadlayo, waxaa loo qaybin karaa wax riixaya, samaynta qolof, ku shubid, dib u farsameyn, iyo kormeer.
Wax riixaya waxaa ka mid ah (wax riixaya, hagaajinta wax, geed kooxeed)
Wax riixaya --- Isticmaal mashiinka wax riixaya si aad u sameysatid wasakhda wax
Dayactir wax - hagaaji caaryada wax ka sameysan
Geed kooxeed --- koox Lamo geed u dhig
Shell sameynta waxaa ka mid ah (ciid laadlaadisay, slurry laalaada, qalajinta hawada)
Dib-u-shaqeynta kadib waxaa ka mid ah (sixitaanka, toogashada qarxinta, ciida ciida, xiirashada,)
Shubista waxaa ka mid ah (dubista iyo falanqaynta kiimikada sidoo kale waxaa loo yaqaan 'spectroscopy', shubid, gariir qolof ah, goynta albaabka, iyo iridda shiidi)
Dib-u-farsameynta ka dib waxaa ka mid ah (isku-darka ciida, xabbadda toogashada, saxitaanka, soo qaadashada)
Kormeerka waxaa ka mid ah (kormeerka wax, kormeerka hore, kormeerka dhexe, kormeerka alaabta ee dhammaaday)
Waxyaabaha ridaya: CF8, CF8M, CF3, CF3M, 4A, 5A, 6A, 904L, Monel, Hastelloy, Aluminium naxaas